Ny fiasa vaovao an'ny Adobe Labs dia mety ho CMS amin'ny ho avy | Famoronana an-tserasera
Ny endri-javatra Adobe Labs vaovao dia mety ho ny CMS amin'ny ho avy
Jesus Arjona Montalvo | | Famolavolana tranonkala, Wordpress
Ny fananganana atiny amin'ny Internet dia mety ho mandreraka, saingy mieritreritra i Adobe fa vaky ny kaody ary mety ho lasa tsara lavitra kokoa izany. Tetikasa vaovao an'ny Adobe Labs Tsy miezaka manampy antsika hamorona fotsiny izy, fa izy Izy io koa dia manampy antsika amin'ny famoronana atiny ho an'ny haino aman-jery maro.
Voalohany indrindra ny zavatra ataony dia 'Smart mpanoratra' na adika amin'ny teny Espaniola 'Mpanoratra Mahay' mampiasa lahatsoratra ampidirina, ary avy eo makà atiny sy sary mifandraika amin'izany hanampiana anao hamorona ny atiny tianao havoaka. Araka ny voasoratra, sary ary ny hafa hafatra pop-up amin'ny sidebar amin'ny fotoana tena izy, ary azo ampiana amin'ny fisintomana ary alatsaho amin'ny fotoana tena izy ilay lahatsoratra na apetaho.
'Famintinana hendry' manampy amin'ny famoronana votoatiny ho an'ny fantsona maro amin'ny mora. Mety tsy mandeha tsara ny fampahalalana amin'ny bilaogy raha mila fampandrenesana hanoto o fampielezana mailaka, noho izany Adobe Labs dia namorona fomba hanampiana hampihena ny fotoana ilaina.
Raha vantany vao nameno fidirana iray ianao, ny 'Famintinana hendry' manao kopia azy hampiasaina amin'ny toerana hafa. Momba ny famaritana lahatsoratra miverimberina izay azo hetezina mora foana. Ianao koa dia manana fifehezana ny fizotrany amin'ny fotoana rehetra, ka tsy misy voapaika raha tsy mahazo ny fankatoavanao.
'Smart Change' dia mifameno mba hamintina tsara ny zavatra nosoratanao, ary avelanao manaparitaka fanovana lahatsoratra fototra amin'ny variants hafa. Azonao atao, ohatra mitantana fanovana imailaka maromaro ho an'ny fampielezan-kevitra nefa tsy mila manova tanana tsirairay, izay manokatra fomba hifehezana ny lesoka.
Na dia natokana ho an'ny mpivarotra aza ireo fanovana ireo, ary ao anatin'ny dingana beta voalohany izy, dia tsapanay ny fomba ahafahan'ny Adobe manangana an'io ho lasa zavatra midadasika kokoa atsy ho atsy. Angamba ny CMS zava-dehibe toy ny WordPress Tokony hanahy kely momba ny zavatra iasan'ny Adobe izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Ny endri-javatra Adobe Labs vaovao dia mety ho ny CMS amin'ny ho avy